I-Goji berries yokulahlekelwa isisindo: indlela yokuthatha, iresiphi, indlela yokusebenzisa ama-Berries ukwenzela ukulahleka kwesisindo goji: ukuhlolwa kwangempela
I-intanethi igcwele iintengiso malunga nokulahlekelwa kwesisindo esinokumangalisa ngokuncedisa i-goji berries, kodwa kunjalo? Omnye umgibe wokuthengisa okanye umthombo obaluleke kakhulu wezondlo? Kule nqaku uza kufumana yonke inkcazelo enomdla malunga nokuba i-goji berries iyakunceda ulahlekelwe isisindo. Iinyaniso zenzululwazi kuphela, ezixhaswa yimithombo.
I-Goji berries: iincwadi zokufunda
Usapho lweSrubhi Ukuqhayisa ngegama elithi Dereza vulgaris (Lycium barbarum L.). Iintyatyambo zibomvu, zenziwe njengeentsimbi. Iintlobo 3-5 iintsuku kuxhomekeke kwindawo yokukhula. Iibroji ezona zincedo ziwela kwi-peak of productivity - ngo-Agasti. Iintyatyambo zibomvu ezibomvu zemilo, zifana ne-barberry kunye ne-dogwood.
Ilizwe lakwa-shrub elidumileyo yi-Tibet, i-Himalayas kunye nenxalenye esemantla yaseChina. Nangona kunjalo, goji ikhule ngokugqibeleleyo kwintsimi kunye nogogo. Imbewu ayiyiyo into enomhlaba, kwaye umgangatho wamajikijolo awunayo yonke into.
Ipropati ye-goji berries yokulahleka kwesisindo, isekelwe kwimibono yangempela
Ibhere elimangalisayo ngokwenene linomlingo womlingo:
18 amino acid;
IiVithamini zeqela B, i-vithamini C;
Izimbiwa ezingama-21 (eziqhelekileyo: i-potassium, isinyithi,
i-zinc, i-manganese, ithusi kunye ne-germanium engaqhelekanga,
obangela ukutshabalalisa okuqhelekileyo
iiseli, oko kukuthi, kuthintela uphuhliso lomhlaza);
I-Poly- kunye ne-monosaccharides;
Ama-acids angama-fatty acid;
Uluhlu olupheleleyo lwezinto ezisebenzayo ze-goji zithintela umzimba ngendlela engcono kakhulu, kodwa ukulungiswa kwamanzi amajikijolo awanelanga. Ewe, zikhawuleza i-metabolism, zivamise iswekile yegazi, kodwa musa ukuphula amanqatha, njengezithembiso zentengiso. Ukukhangela itiye kumajikijolo, kodwa ngelixa udla ama-donuts amathathu kunye ne-platebe yamazambane ezidibeneyo, awukwazi ukuphupha.
Ngo-2011, e-Arizona, i-US yenza ucwaningo lwezesayensi malunga nendlela yokuthatha amajiji e-goji ukulahleka kwesisindo nokuba ngaba kunokwenyuka kobunzima bokwakhe. Njengolu vavanyo, amaqela amabini abantu abaneminyaka engama-34 ubudala kunye nobunzima ngaphezu kwesiqhelo kunye nesalathisi somzimba we-29 kg / m sithathwe. Abanye bathatha i-120 ml yejiji ye-goji iintsuku ezili-14, kunye nezinye iindawo ezihlala kuyo. Ngenxa yoko, iqela elitya amajikijolo lalahleka u-5.5 cm okhalweni, ngenxa yokukhawuleza kwe-metabolism. Abo baphuza nje ijusi enjenge-taste, behla 1 cm.
I-Goji berries: njani ukuthatha ukulahleka kwesisindo? Brew okanye udle omisiwe?
Umzimba ufumana inzuzo ephezulu kwiLiccium barbarum L. kuphela xa idla imveliso kwifom emile. Ayikho itiye, ikhofi kwi-berji ye-goji ayinakuthintelo ekulahlekelweni kwesisindo. Kwaye nangona i-runet igcwele ulwazi malunga neempawu ezimnandi zeeyi, isayensi ingqiniswanga. Kwilizwe le-CIS, akukho sifundo esisodwa malunga nokuphumelela kweentlobo zamajikijri aseTshayina, ngoko ungakholelwa ukuvakaliswa kwamanga!
AmaTibetan kunye namaTshayina adla amajikijolo kwifom eluhlaza kunye nesomileyo, ngoko kutheni amaRashiya kufuneka aqoke ibhasikidi? Ijusi esuka kwiGoji inomdla kakhulu, kodwa kunzima kakhulu ukuyifumana eRashiya.
Ukubuyisela umzimba, udle ama-5-10 amajikidi ngosuku. Ukuba ingqondo igxininisa imfuneko, thobela. Umlinganiselo weejiji ze-goji zokulahlekelwa isisindo ngokwawo, kwaye ekubeni iipropati zemveliso aziqondi kakuhle, umcebisi omhle ngumvakalelo wakhe. Musa ukusela amanzi. Ukoma okwesithathu? Phuza ingilazi yelwelo ngaphambi kokuba uhlaziye, kodwa kungekhona ngexesha lokutshiza. Ngoko isisu sithatha zonke izixhobo ezincedo, kwaye amanzi aphelisa kuphela ukutshatyalaliswa kwawo.
Ingongoma ebaluleke kakhulu - yidla izithelo zebriji kwisisu esingenalutho, ukuze kwakhona umzimba uphinde ufumane ubuninzi bezinto ezizodwa. Ukuxhaphazwa kwe goji akuvumelekanga, kodwa ubuncinci kubiza kakhulu. Iipakethi zeebhanki zendalo ngqo kwiindleko zeendawo ezimalunga ne-$ 15 kwi-eBay. Indlela yokuhlukanisa inkohliso, siya kukuxelela emva koko.
I-goji berries ngokumelene nomhlaza, ukuguga kunye nesifo sikashukela: into okanye inyaniso?
Iyeza zonyango zaseMpuma zisoloko zidumileyo ngenxa yezonyango ezingaqhelekanga ezamangalisa umphumo. Ngoko iziqhamo zomthi oqhelekileyo (i-Lycium barbarum L.) zikhusela ngokwenene ukuphuhliswa komhlaza, zinefuthe elinamandla kunye ne-antioxidant, ukuthintela ukubonakala kunye nokuncedwa kunyango lwe-II i-diabetes (i-insulin-dependent-dependant).
NgoDisemba 2014, amasebe ama-5 kwiiyunivesithi zonyango, ii-laboratories ezingama-3 zeRiphablikhi yabantu baseChina kunye namaziko angama-3 okuphanda amayeza aseTshayina e-Florida, eU.SA, asebenzisana. Bafumene ikhono lokwenene lokwenza i-polysaccharides LBPs ukusuka kwi-berji ze-goji:
ukuvimbela ukuphuhliswa kweeseli zomhlaza;
ukuhlamba iibisi kunye nokukhusela
sebenzisa iiseli ezibulalayo eziqhelekileyo,
ngubani "odla" umdlavuza;
ukunciphisa ushukela wegazi
kwaye zijonge umsebenzi weziqithi
ungavumeli ukuphuhlisa i-glaucoma;
ukukhusela isibindi kwisifo esiyingozi
ukunciphisa umonakalo kwiiseli ezisuka kotywala;
ukuthintela uhlangothi lweengqondo;
phucula imemori kwaye ivimbele ukuphuhliswa kwesi sifo
ukwandisa umonakalo we-spermatozoa
kwaye uyabakhusela kwi-toxins;
phucula umsebenzi we-cardiovascular
inkqubo kunye nokuqinisa iintliziyo zeentliziyo.
Indlela yokwahlula i-fake kwi-berries yokulahleka kwesisindo?
Ukuphononongwa kwamajikijolo ekulahlekeni kwesisindo kunzima kakhulu: umntu uthi ngokuphuculiswa kwemilingo yempilo, kwaye umntu, ngokuchaseneyo, uqokelele "i-bouquet" yeengxaki ngesisu. Kutheni oku kwenzekayo? Yonke into malunga nesidingo esikhulu sokongeza isondlo esikhulu kwi-market "emnyama".
Asazi ngubani oqokelela amajikijolo kwaye apho, kwaye abazi ukuba baqhuba ntoni. Abahambisa kuphela babeka amanani, amasheya kunye nezaphulelo, kodwa bafihla ukubunjwa okwenyaniso kunye nendawo yokuqokelela i-goji. Ngamanye amaxesha, endaweni yeziqhamo ze-commonwealth, i-cranberries eyomileyo ithunyelwa ngexabiso elincinci. Akunakwenzeka njani ukuwa ngenxa ye-scammers?
Ixabiso kunye nezaphulelo. Ungaze ukholwe njengamanyathelo afana neentlobo: "Kukho iiphakheji ezi-9 kuphela! Ixabiso elitsha linama-ruble angu-999, ii-ruble ezindala ezingama-1500 ze-100 g yemveliso! Khawuleza ulandelele! ». Oku akunjalo ngaphandle kobuqhetseba. Ngesikhwama endaweni yeejikijolo uza kufumana utyhefu wangempela. Ewe, kuya kuba ngumgangatho ophantsi we-goji, kodwa uqhutywe kunye nezilondolozo.
Ungacacise ubunzima bephakheji.
Ixabiso eligqithisiweyo lihlala lidala ukusola kwemveliso eyaziwayo. Musa ukukhangela, ukuba izolo zingu-5000 ruble ama-500 amagremu, nanamhlanje ama-ruble angama-2500.
Ithemba lamanga: "I-tea evela kwijiji ze-goji iyatshisa i-20 kg ngenyanga!".
Ababoneleli abanokwethenjelwa abazivakalisi emphakathini.
Cela ukucacisa ukubunjwa kunye nendlela yokomisa amajikijolo. Ubuninzi bezilondolozo bubonisa umkhiqizo ongaphantsi. Awunamanzi okomileyo kunye omiswe ngama-chemistry, kunene?
Gxininisa kubavelisi kunye namanani kwivenkile ye-eBay.
Thenga imbewu kwaye utyala izindlu egadi. Iipakethi eziyi-1 (iinqununu ezingama-60) iindleko malunga ne-$ 2
Iibhereji ngokulahlekelwa kwesisindo, isithombe
Jonga indlela i-goji berries ebonakala ngayo.
Iitayi ezivela kwiijikijolo.
Ukutya okukhethekileyo kaSofia Rotaru: yintoni imfihlelo yobuhle obungabonakaliyo nolutsha lwa "mlimi" odumile
Ezi zidibaniso eziqholiweyo zikunceda ulahlekelwe isisindo kwaye wenze ulusu luhle
Indlela yokuphucula umoya weengqondo kwiqela
I-paraffini isongela kumanqaku atywe
Iziqholo kunye netyuwa ekudleni komntwana
Izibonda zobomi bentsapho
Yintoni enokuyenza ngeesayini zesini?
Indlela yokuphilisa i-sinusitis kunye nezilwanyana zamalungu
AmaSandwich kunye nama-meatball kwi-bacon
Iimbambo zeengulube kwi-kefir marinade
I-Horoscope ye-2010, amawele, ibhinqa